३५५८ मत गन्दा देउवा पक्षका दुवै उम्मेदवारले लिए अग्रता, कसको कति मत ? - jagritikhabar.com
३५५८ मत गन्दा देउवा पक्षका दुवै उम्मेदवारले लिए अग्रता, कसको कति मत ?
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनअन्तर्गत उपसभापति पदको मतगणना जारी छ ।
उपसभापतिको ३५५८ मतगणना हुँदा पूर्णबहादुर खड्काले १६३४, विजयकुमार गच्छदारले १४४३, धनराज गुरुङले १४३७ र डा. चन्द्र भण्डारीले १२५७ मत पाएका छन् ।
खड्का र गच्छदार दुवै सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलका हुन् ।
उपसभापतिका अन्य उम्मेदवारहरू सुजाता कोइरालाले ४38, महेश आचार्यले ४१३ र दिव्येश्वरी शाहले ११७ मत पाएका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ४ हजार ७४३ प्रतिनिधि चुनिएर आएकोमा ४ हजार ६७९ जनाले मतदान गरेका निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिका २ उपसभापतिमा डा. चन्द्र भण्डारी, दिव्यश्वरी शाह, धनराज गुरुङ, पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
यसअघि सभापति पदमा दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विजयी भइसकेका छन् ।